Our MOQ 1000pcs, Ouhai လေးစားပါတယ်"ပထမ ဦး ဆုံးအရည်အသွေး, အားလုံးထက်ကျော်ကြားမှု" ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတရားအဖြစ်,အခမဲ့ဒီဇိုင်းကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီးဖောက်သည်များနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသောစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်သည်,ငါတို့နှင့်အတူသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်စိတ်ကြိုက်ရန်အလွန်ကြိုဆိုပါသည်.
မင်းရဲ့စိတ်ကူး,မင်းရဲ့ဒီဇိုင်း,သင့်ထုတ်ကုန်များ ,Ouhai မှစတင်ရန်မျှော်လင့်သည် !
Gloss / Matte Lamination, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, Aqueous ကုတ်အင်္ကျီ, ချစ်ခြင်း, ရွှေ / ငွေတိမ်ခြင်း
Surface Finishing ချေးငွေ / ဖောင်းကြွ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ , အားကစားခရမ်းလွန်စသည်.
ပုံနှိပ်ရွေးချယ်မှု CMYK ပုံနှိပ်ခြင်း, အစိုင်အခဲအရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု EVA, ဖဲကြိုး, Pet Tray, PVC блистер, ရေမြှုပ်, ကတ္တီပါ, သံလိုက် , ချည်လက်ကိုင်
Artowrk ပုံစံ CorelDraw , Adobe Illustrator, ဒီဇိုင်း၌, PDF, PhotoShop
နမူနာအချိန် အတွင်းမှာ 3-5 အလုပ်လုပ်ရက်
ထုတ်လုပ်မှုအချိန် အတွင်းမှာ 10-15 အမိန့်အရေအတွက်အရသိရသည်နေ့ရက်များ
သင်္ဘောလမ်းကြောင်း ပင်လယ်အားဖြင့်သင်္ဘော, လေကြောင်းဖြင့်, Express က:Fedex,DHL,ယူပီအက်စ်,TNT
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ T / T, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, PayPal သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်
ထုပ်ပိုး စံတင်ပို့ပုံး, ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်
အခြားအားသာချက်များ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်, ဒီဇိုင်း,ထုပ်ပိုး& ပုံနှိပ်
OEM,ODM ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြိုဆိုပါသည်
ကျနော်တို့ထုံးစံအမိန့်ကိုလက်ခံပါ. ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးသည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောတိုင်းတာခြင်းအဖြစ်, ဖွဲ့စည်းပုံ, အရောင်များကိုပုံနှိပ်, မျက်နှာပြင်ပြီး, စသည်တို့. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံပြုချက်များရရှိနိုင်ပါသည်.
Applicable to Shopping, အဝတ်အစား,လက်ဆောင်ပေးမယ်,အရောင်းမြှင့်တင်ရေး,Advertising and Souvenir packing, စသည်တို့
Customer & ထူးချွန်အဖွဲ့:
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ၀ ယ်ယူသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအဖြစ်ရွေးချယ်ကြသည်
Ouhai ပုံနှိပ်ခြင်း, သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည့်နာမတော်. တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အရေးပါသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက္ကူထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, သင်၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်မှုနှင့်စီးပွားရေးမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်! ငါတို့သည်သင်တို့၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအားလုံးအချိန်ဖြစ်ကြသည်.
2) အညိုရောင် kraft စက္ကူဖြင့်စုစည်း; pallets နှင့်အတူ
3) အညိုရောင် kraft စက္ကူဖြင့်စုစည်း; FCL / LCL ကွန်တိန်နာ
4) ကျုံ့ရုပ်ရှင်အားဖြင့်ပတ်ရစ်; pallets နှင့်အတူ; FCL / LCL ကွန်တိန်နာ
5) တိုက်ရိုက် FCL ကွန်တိန်နာအားဖြင့်တင်ဆောင်
ဟုတ်တယ်,ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်များကိုအဖြစ်မဆိုပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်, ကျေးဇူးပြု၍ မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုပြောပြပါ။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုကိုပါပို့ပေးပါ.
အများအားဖြင့်ကျနော်တို့အတွင်းမှာကိုးကား 24 ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရပြီးနောက်နာရီ.
ခ. ပုံနှိပ်နမူနာစိတ်ကြိုက်သည်, ငါတို့အားသွင်းလိမ့်မယ် $30-$100 ရုပ်ရှင်အပေါ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်&ပုံနှိပ်.
ဂ. နမူနာပြီးနောက်ပေးဆောင်နှင့်ဒီဇိုင်းဖိုင်အတည်ပြုခဲ့သည်,ကနမူနာစေရန် 3-5days လိုအပ်သည်, နှင့်အမြန်ဖြင့်တင်ပို့ 4-7days.
အာအိုင်, PSD, CDR, PDF ပုံစံ.
ဟုတ်တယ်. ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကျွမ်းကျင်သည့်အဖွဲ့ရှိသည်. သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုသာပြောပြပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်များအဖြစ်သို့သယ်ဆောင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်.
ရိုးရိုးလေးပါ, သင်မှာယူမှုအရေအတွက်နှင့်သင်မှာယူသည့်အချိန်ပေါ်မူတည်သည်. ပုံမှန်အားဖြင့် 7-15days ထက်ပို 10000 pcs.
1. ဘယ်အရွယ်အစားကိုလိုချင်ပါသလဲ? သို့မဟုတ်သင်ထုပ်ပိုးပါလိမ့်မယ်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား?
2. ပစ္စည်းအမျိုးအစား? ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်အဖြစ်?
3. ဘယ်နှစ်ယောက်အရောင်များပုံနှိပ် ? 1 အရောင်?2အရောင်များသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို?
အီးမေးလ် [email protected]rinting.com